Bangkok Airways kwupụtara nkwụsịtụ nke Bangkok - ụgbọ elu Samui
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Bangkok Airways kwupụtara nkwụsịtụ nke Bangkok - ụgbọ elu Samui
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ahụike • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ na -emegharị na Thailand • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Bangkok Airways kwupụtara nkwụsịtụ nke ụgbọ elu Bangkok - Samui
Bangkok Airways Public Company Limited na-akwa ụta maka ịkpọsa nkwụsịtụ oge nke ụgbọ elu Bangkok - Samui site na 21 July 2021 gaa n'ihu.
Ndị njem metụtara nkwụsị ụgbọ elu nwere ike ịnwe ụgwọ maka ịgbaghara ma ọ bụ nwee ike ịrịọ nkwụghachi n'ụdị akwụkwọ njem maka tiketi tiketi n'ọdịnihu.
Ndị njem chọrọ ịgbanwe njem ha na-enweghị ụbọchị ọhụụ akọwapụtara nwere ike itinye arịrịọ ha n'ịntanetị n'ime awa 24 tupu ụbọchị ọpụpụ a chọrọ.
Dabere na Nkwupụta sitere na Civil Aviation Authority nke Thailand (CAAT) gbasara ụkpụrụ nduzi maka ndị na-ahụ maka ọdụ ụgbọ elu na ndị ọrụ ụgbọ elu n'okporo ụzọ ụlọ n'oge ọnọdụ ntiwapụ nke Ọrịa Coronavirus 2019 (COVID-19) (Mba 3), iji rube igbochi usoro nyocha dịka ihe ndị achọrọ na iwu nke steeti, Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Bangkok Airways Public Company Limited Na-akwa ụta maka ịkpọsa nkwụsịtụ nwa oge nke Bangkok - Samui (vv) malite na 21 Julaị 2021 gaa n'ihu.
Na mgbakwunye na nke ahụ, ụgbọ elu ga-achọkwa ịkpọsa yigharịrị ụfọdụ n'ime ụzọ ụlọ ya nke akwadoro ịmaliteghachi na 1st nke Ọgọstụ 2021 ruo mgbe ọkwa ọzọ. Rozọ ndị eyigharịrị gụnyere: Bangkok - Chiang Mai (vv), Bangkok - Phuket (vv), Bangkok - Sukhothai (vv), Bangkok - Lampang (vv) na Bangkok - Trat (vv)
Agbanyeghị, ụzọ ndị Samui dị ugbu a, ụgbọ elu na-ebugharị ma ọ bụ nyefee ndị njem mba ofesi, na-ejikọ site na Bangkok (Suvarnabhumi) ruo Koh Samui (ụgbọ elu 3 kwa ụbọchị) ka ga-arụ ọrụ dị ka ọ dị. Na mgbakwunye, ụzọ Samui - Phuket (vv) ka ga-adị ụgbọ elu 4 kwa izu (Mọnde, Wenesde, Fraịde na Sọnde) iji kwado ọrụ Phuket Sandbox nke mba ahụ.
Ndị njem nke metụtara nkwụsị nwa oge nwere ike ịnwe ụgwọ maka ịgbaghara ma ọ bụ ọzọ nwere ike ịrịọ nkwụghachi n'ụdị akwụkwọ njem iji jiri tiketi tiketi n'ọdịnihu. Ndị njem nwere ike ịme mgbanwe ọ bụla dị mkpa ruo elekere 24 tupu ụgbọ elu ha.
Ndị njem chọrọ ịgbanwe njem ha na-enweghị ụbọchị njem ọhụụ akọwapụtara (tiketi emepere emepe) nwere ike ịnye arịrịọ ha na ntanetị n'ime awa 24 tupu ụbọchị ọpụpụ a chọrọ. Linegbọ elu ụgbọ elu ahụ ga-eji ozi enyere site n'ụdị dị otu a iji nye ndị njem njem ọzọ.
Bangkok Airways rịọ mgbaghara maka nsogbu ahụ kpatara na ụgbọ elu ahụ ka na-etinye maka nchekwa na ịdị ọcha nke ndị njem na ndị ọrụ anyị dị ka ihe kachasị mkpa. Ndị ụgbọ elu na-etinye usoro nyocha iji gbochie mgbasa nke COVID-19.